तपाईंले राहत पाउनुभएको छैन ? यी व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (नाम र नम्बरसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
तपाईंले राहत पाउनुभएको छैन ? यी व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (नाम र नम्बरसहित)
२०७७, ८ बैशाख सोमबार
काठमाडौंः कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा भएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । लकडाउनका कारण मजदुरी, श्रमिक, विपन्न, असहायलाई दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भइरहेको छ ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गरिरहेको छ । तर पनि तपाईंले राहत पाउनुभएको छैन ? राहत नपाउनेहरूका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस राहतमा कुहिएको दाल वितरण गर्ने मेयर धरौटीमा छुटे
मन्त्रालयले ७ प्रदेशमा ७ जनालाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । राहत नपाएकाहरूले ती व्यक्तिलाई सम्पर्क गरे उनीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी हुन् ७ वटै प्रदेशका सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बरः
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, यी विषयमा हुनेछ छलफल
सरुवा भए स्वास्थ्य सचिव कोइराला
कर्णालीमा १ वर्षीय बालकसहित थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण
अग्रमोर्चामा खटिएका प्रहरीको सडकमै बास!
हङकङबारे अमेरिकी बयानले विश्वभरी चिन्ता, अर्थव्यवस्था र व्यापारमा गम्भीर असर पर्ने
दाङका १५ कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लगियो
सुदूरपश्चिममा फेरि थपिए ३ जना कोरोना संक्रमित